Raha ny tatitra dia antony roa no nahatonga ny loza ; ny fivadihan’ilay sambo nandalo teo amin’ny vinany vokatry ny hamafin’ny onja sy ny nifindran’ny mpandeha toerana tampoka, nampihilana sy nampivadika ilay sambo. Nokianin’ny vaomiera ny akora maivana nanaovana ilay sambo sy ny tanjak’ireo maotera roa nitaha tamin’izany. Voalaza aza fa sambo tsy natao ihany koa hanapaka io elanelan-tany io fa nosokajiana hanao fitaterana amin’ny sisin’ny ranomasina fotsiny ity nampiasaina ity.
Hatramin’ny ela no efa fantatra fa mampidi-doza ny fandalovana eo amin’ilay vinany. Ny mpanamory ilay sambo, niofana tamin’ny fitondrana mpizaha-tany fa tsy tokony nitondra manapaka io toerana io.
Ny faharoa dia ny fipoahan’ilay sambo ka namono olona enina sy nandratra olona valo. Ho an’ny fianakaviana Ramaroson anefa dia tsy mbola mazava hatramin’izao izay antony nampipoaka ilay sambo. "Nahoana ny fitahirizan-tsolik’ilay sambo no tsy vaky. Naninona ny maoterany tsy niparitaka akory. Nahoana no nieren-doza ilay kaomandà sy ny mpamily ny sambo. Misy tsaho iniana aely, milaza fa vokatry ny grenady nentin’ny mpiambina ny minisitra Nadine Ramaroson kanefa tsy nahazo grenady izy ireo ary tsy nomena alalana nitondra izany fa noforomporonina fotsiny", hoy Razananaivo Victor Emile, mpitondra tenin’ny fianakaviana. Nambaran’ny vaomera fa mbola hitohy ny asany mikasika izay fipoahana izay.